I-SAFA ibuke uChauke oneminyaka eyi-17 njengoba enyukela ebholeni laseNgilandi | Scrolla Izindaba
I-SAFA ibuke uChauke oneminyaka eyi-17 njengoba enyukela ebholeni laseNgilandi
I-South African Football Association (i-SAFA) isiqinisekisile kuScrolla.Africa ukuthi bayayiqapha inqubekela phambili yethalente lentsha yakuleli edlala phesheya.
NgoMsombuluko ebusuku uKgaogelo Chauke owazalelwa e-Mamelodi usabalale ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokufakwa eqenjini lase-Southampton elishaye ompetha baseNgilandi i-Liverpool ngegoli elilodwa eqandeni.
Yize lo mdlali oneminyaka eyi-17 ubengasetshenziswanga esikhundleni, abashisekeli bebhola bakuleli bajabule ukumbona okokuqala kule ndawo. Abaningi bancenge i-SAFA ukuthi iqinisekise ukuthi ithalente elinje alilahleki njengoba bebona isihlabani seBafana Bafana esizayo.
“Yebo, siyaliqapha lonke ithalente lentsha yethu edlala phesheya. Mayelana noKgaogelo Chauke saze samfaka esikwatini sokuqala sama-Olympics ngonyaka odlule futhi simbhekile,” kusho iNhloko Yezokuxhumana ye-SAFA, uDominic Chimhavi.
Lo mdlali wasesiswini washiya iNingizimu Afrika esenonyaka owodwa nje vo wathuthela e-United Kingdom nabazali bakhe bobabili abadabuka ePitoli, nokuyilapho aqala khona ukudlala ibhola waze wajoyina amabanga amancane e-Southampton ngowezi-2017.
Ngesikhathi eneminyaka eyi-16, uChauke ubedlala ezinhlangothini zombili zase-Southampton ezingaphansi kuka-18 nama-23 ngesikhathi naye ezilolonga neqembu elikhulu elincintisana kwi-English Premier League.
Ngonyaka odlule ngoMsingana usayine inkontileka yakhe yokuqala eqenjini eliphakeme le-Saints. Yize engazange aqale ukudlala i-Saints izolo ebusuku edlala ne-Liverpool, uChauke ubhale ku-Twitter wathi: “Isipiliyoni esihle, ngethemba lokuqala kwamaningi”.
Lo mdlali wasesiswini osemusha useke wadlalela iqembu laseNgilandi elingaphansi kweminyaka eyi-17 futhi kufanelekile ukuthi adlalele iqembu lesizwe lase-England eliphakeme. Kodwa-ke kunemibiko yokuthi uzimisele ukuzinikela kumibala eluhlaza nephuzi yeBafana Bafana kungekudala.
Yize ephethe ubuzwe baseNgilandi, imithetho ye-World Football Body (i-FIFA) ithi umdlali oseke wadlalela amaqembu esizwe amancane usavumelekile ukukhetha nokudlalela iqembu lesizwe eliphezulu alithandayo.
I-SAFA inamalungelo ayo okubiza umdlali wasesiswini ophakathi nendawo ukuthi azodlalela iqembu labo labangaphansi kweminyaka engama-23 kuma-Olimpiki ase-Tokyo azayo ngasekupheleni konyaka ngisho nakwiBafana Bafana.